Sida lagu Helo Free iPhone Apps Xitaa loo siiyay Apps
Sida lagu Helo Apps on iPhone u Free
Ma jiraa qof aan jeclahay oo lacag la'aan ah? Ma jiro user sida keli ah ee dhammaan bulshada macruufka oo aan rabin in ay codsiyada free bixi in ay mobile. By codsiyada free version buuxa oo ka shaqeynayaan waxaa loogu tala galay. Si aad u hubiso in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira tutorial tani ayaa loo sameeyey.
Part1: shaqeynta buuxda App Store
Part2: lacag laga daadiyo by suuqa xorta ah Time-xadka
Part3: Hel barnaamijyadooda la wadaago dadka kale via TunesGo Retro
Part4: Hel software APP qaybinta free
Part5: Raadinta on websites
Part1: App Store shaqeynta buuxda (baadhitaan Chine oo lacag la'aan ah, qaybaha Author iyo App dukaanka baadhi)
Waxaa caadi ah in aad ayaa lagaga wada hadlay sidii tirada dadka ah ee isticmaala in ka badan forums kala duwan. Laakiin user cusub taasi oo laga yaabo noqday arin ay sabab u tahay xaqiiqada ah in macruufka ma fududa in ay ku shaqeeyaan u user cusub. Ka dib waxaa hanaanka arrintan la xiriira oo ku aaddan tahay oo dhan dhibcood ka:
i. User waxay leedahay inay hesho codsiga dukaanka app gudahood khaanad codsiga ah iPhone:
ii. Buuxi loo baahan yahay info iyo jaraa'id oo dhan OK:
iii. Browse app gudahood qaybaha:
iv. App waa in la daah furo si ay u helaan faahfaahinta si ka badan fursadaha lagu baari kartaa:
. v Press "Get" in la sii wado dheeraad ah ee arrintan la xiriira:
vi. Tuubada rakibi dhammayn nidaamka iyo inaad kala soo baxdo app iyo taas oo si toos ah lagu rakibi doonaa by macruufka ah:
Qaybta 2. lacag barnaamijyadooda by suuqa xorta ah Time-xadka
By markii suuqa xorta ah xadka ka dhigan tahay in codsiga lacag loo heli karaa muddo xadidan oo ah waqtiga si loo hubiyo in dadka isticmaala dheeraad ah ka heli kartaa faa'iidooyin iyo soo bixi codsiga si ratings loo horumarin karo muddo ka dib. Ka dib waxaa hanaanka arrintan la xiriira:
i. Fiiro-lfy waa codsi in uu yahay lacag la'aan ah muddo kooban oo mar. In kastoo qiimaha caadiga ah ee codsiga ma aha sare weli waxa ay taasi saamayn aad u weyn. Interface waa sida soo socota:
ii. Si aad u soo bixi codsiga user ay u baahan tahay in ay soo booqdaan http://bgr.com/2015/05/26/best-free-iphone-apps-ipad-may-26/ oo guji link download,
iii. Tani waxay keeni doontaa user dukaanka App halkaas oo uu u baahan yahay si loo hubiyo in "Download free" button la isku soo riixayo,
iv. The Dardar in la soo bandhigay for app download ee la raaco si loo hubiyo in la rakibo la dhameystiro oo app uu diyaar u yahay in ay ka shaqeeyaan. Tani waxay sidoo kale ka baxayo geedi socodka ee user buuxa oo hadda ku raaxaysan karaan app bixisay in la soo bixi oo sabab u ah waqtiga xadidan free dalab. Ma aha oo kaliya Fiiro-lfy laakiin waxaa jira tobanaan kun oo Chine in la heli karaa via waqti xadidan free dalab.
Qaybta barnaamijyadooda 3. Qaadato la wadaago dadka kale via TunesGo Retro
Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyada software fudud loo isticmaali karo in ay sameeyaan wixii kaloo ah in arrintan la xiriira iyo user xaqa u baahan yahay in la hubiyo in barnaamijka software la soo bixi oo ku rakiban. Talaabooyinkan hoos ku xusan
Oo weliba qalab kale oo awood leh oo xiiso badan in la soo saaro by Wondershare magaca TunesGo Retro waxaa uu u suuragelinayaa isticmaala si aad u hesho barnaamijyadooda la wadaago dadka kale hab degdeg ah oo wax ku ool ah. Geedi socodka waa in gundhig gudahood waa cadaalad ah oo fudud oo sabab ka mid ah dadka isticmaala ay khasab ma aha in ay la kulmaan ka kaaftoomi kasta oo arrintan la xiriira. Ka dib waxaa loo faahfaahsan oo ka mid ah tallaabooyinka ku lug leh arrintan la xiriira:
i. User wuxuu u baahan yahay in ay soo bixi barnaamijka ka http://www.wondershare.com/ios-manager/ oo waa inay raacaan Dardar si loo hubiyo in la rakibo waxaa la sameeyaa:
ii. In tallaabada xigta user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in iDevice ku xiran yahay in kombiyuutarka la cable USB ah:
iii. Software ayaa si toos ah lagu ogaan doonaa qalab laftiisa oo wuxuu muujin doonaa waxyaabaha si ay u la musuq maasuqay kartaa:
iv. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in dhoofinta in button hogaanka la isku soo riixayo si hoos hoos menu muuqataa. Oo halkaasaannu ka user ay u baahan tahay in ay doortaan qalabka ku habboon si ay taas kala iibsiga ayaa loo baahan yahay. Marka samaysay dhammayn doonaa geeddi-socodka si toos ah:
Qaybta 4. Hel software free APP qaybinta
Barnaamijyada software qaybinta lacag la'aan ah in la hubiyo in codsiyada macruufka ah waxaa lagala soo bixi oo lagu rakibay oo aan wax dhibaato ah oo arrintan. Waa in la ogaadaa in horumarinta free ah codsiyada waxba ma tarayo sidii kuwa ka bixisay waxaa laga yaabaa, laakiin weli waa aalad awood si loo hubiyo in user helo codsiga in buuga internet-ka iyada oo aan arin kasta. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijyada software free sidoo kale ay ka bixisay mobilada iyada oo istaraatijiyad adag la soo saari karaa arrintan la xiriira. Ka dib markii qaar ka mid ah ilaha ugu arrintan la xiriira:
i. www.snapchat.com waa mid ka mid ah dhufto ee ugu fiican in hubiyaa in codsiga la qaybiyey lacag la'aan ah iyada oo loo marayo website a micro. Ka dib waa sawir ah website-ka:
. ii https://path.com/ waa aalad weli awood badan oo kale oo lacag la'aan ah si ay u hubiyaan in codsiga macruufka la wadaago adduunka oo lacag la'aan ah:
iii. http://appadvice.com/reviews waa aalad kale oo lacag la'aan ah oo kuu ogolaanaya in user si loo hubiyo in codsiga la soo degeen inay website-ka iman kara iyo horumarinta macruufka isticmaali kartaa madal si ay u hubiyaan in codsiga la dalacsiiyay ka baxsan Apple ee app dukaanka:
Qaybta 5. Raadinta on websites
Website goobidda iyo Falanqaynta sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee caleenta ee codsiyada macruufka ee la xidhiidha qofka iyo sidoo kale ganacsatada ayuu ku egyahay. Qaar ka mid ah dadka isticmaala macruufka waxaa ka mid ah aragtida ah in natiijooyinka raadinta ee loo soo bandhigay by dukaanka App waxaa ka buuxa qaladaad iyo waa sabab u ahaa xaqiiqada ah in gacan muggeed oo ka mid ah codsiyada waxaa soo gaaray iyo soo bandhigay iyo mararka qaarkood user u baahan yahay app wixii aan ku qoran natiijooyinka bilowga ah raadinta ama ma kaalinta ugu sareysa. Si looga fogaado dhan walax tan waxaa jira bogag oo ururiyaan macluumaad ku saabsan codsiyada gaar ah waxaa lagu soo bandhigay by dukaanka App in dadka isticmaala iyo ay khuseeyaan badan oo iyaga ka mid ah, laakiin weli iska indho sabab u ahaa xaqiiqada ah in ay marnaba ku qoran ugu sareysa. Websites ayaa sida AppShopper iyo AppLISTS loo hubiyo in dhammaan liiska sida waxaa lagu soo bandhigaa in dadka isticmaala si ay u heli kartaa faa'iido buuxa iyo codsiga si toos ah kala soo bixi kartaa in software Lugood in lagu rakibay on nidaamka. Markaas codsi Lugood Tan waxaa synced la qalab bartilmaameed iyo xogta la wareejiyo oo badbaadiyay waqti badan isticmaalayaasha.
Difaacayno macluumaadkaaga gaarka kuu ah marka iibinta, warshadaynta ama Deeqda qalab jir.
10 Apps Best u Lyrics
Best YouTube Video ayeey Software & Apps
17 Best Free iPhone Apps Waxaad u
Sida loo sameeyo Custom Ringtones la Ringtone magaabay / Editor Apps?
15 Best Nadiifinta Apps u Android
10 Best Free Instagram Photo Apps Waa inaad isku daydaa
10 Best Free Instagram collage Apps Waa inaad isku daydaa
Liiska Comprehensive iyo balaaran oo ka mid ah Apps usameeyay Google ee Chromecast
Video Player Apps (macruufka & Android)
Top 5 SnapPea Alternative
> Resource > Apps > Sida lagu Helo Apps on iPhone u Free